अर्ल्ल: के भुक्तानी फैलावट र यो कसरी बचाउन सकिन्छ?
भुक्तानी धोखाधड़ी एक साइबर आपराधिक द्वारा निष्पादित एक अवैध या गलत लेनदेन को कुनै पनि रूप को संदर्भित गर्दछ। स्क्यानरले व्यक्तिगत डेटा, धन, र पीडितको ब्याजका अन्य मापदण्डहरू प्राप्त गर्दछ।
ओलिवर किंग, ग्राहक सफलता प्रबंधक सेल्टल्ट , मूल्यवान अवधारणाहरु लाई साझा गर्दछ जो तपाईंलाई अनलाइन हमलाहरु लाई निपटने मा मदद गर्नेछ।
निम्न विधिहरू छन् जुन भुक्तानी धोखाधारी कार्यान्वयन गरिएको छ:
चोरी या खोया व्यापार।
अनधिकृत वा धोखाधीन लेनदेन।
बरु वा फिर्ती जाँचहरू, फिर्तीको लागि नकरा अनुरोधहरू।
ई - वाणिज्य संगठनहरू ग्राहकहरूबाट भुक्तानी अनुरोध गर्न इलेक्ट्रनिक लेनदेनमा निर्भर गर्दछ। जस्तै, इलेक्ट्रोनिक लेनदेन को संख्या धोखाधड़ी गतिविधिहरु को स्केलिंग गर्न को लागी बढेको छ।
विभिन्न प्रकार को भुक्तानी धोखाधड़ी मा शामिल हो:
कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्म जसले बैंक खाता वा क्रेडिट कार्डको व्यक्तिगत डेटा चाहिन्छ यो आक्रमणको जोखिममा छ। स्रोतमा वैध हो, उदाहरणका लागि, एक बैंकसँग एक पति, प्लेटफर्म विश्वसनीय छ। तर, यदि स्रोत राम्रो तरिकाले ज्ञात छैन भने, यसले अवैध रूपमा डाटा प्राप्त गर्ने हस्तक्षेपलाई चित्रण गर्न सक्छ।
यो एक सामान्य प्रकारको धोखा हो जुन डिजिटल दायराको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ। यो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रतिरूप गर्दछ जब निश्चित अपराधहरू निष्पादित गर्नका लागि उसको डेटा प्रयोग गर्दछ। पहिचान अपराध प्रायः सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरी लगइन क्रेडेन्सियलहरूको च्यानलको रूपमा क्रियान्वित गरिएको छ।
यो हुन्छ जब एक हैकर hijacks तपाईंको ई-वाणिज्य साइटको एक खण्ड र वेब प्रयोगकर्ताहरूलाई फरक प्लेटफर्ममा डोऱ्याउँछ। धेरै मामिलाहरूमा अवांछित वेबसाइट दुर्भावनापूर्ण सामग्री हो जसले स्क्यानरहरू तिनीहरूको खोजी गर्न प्रयोग गर्दछ। नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली को तरीका।
वायर ट्रांसफर र उन्नत शुल्क घोटाले:
ह्याकरहरूलाई ई-वाणिज्य मालिकहरू र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई क्रेडिट कार्डको डिलिवरी वा पछिको अवधिमा नगद पैसाको लागि अनुरोध गरेर लक्षित गर्दछ।
व्यापारी पहिचान धोखाधड़ी:
यस किसिमको धोखाधारीले देखा पर्दछ जब ह्याकरहरूले लगत्तै कानूनी संगठनको स्थानमा व्यापारी खाता खोल्छन् र चोरी क्रेडिट कार्डबाट फर्किन्छन्। त्यसपछि स्क्यानरहरूले कार्डधारकहरूले नक्कली भुक्तानीलाई पछाडि खाता बन्द गर्दछन्।
धोखाधडी कसरी हुन्छ?
Fraudsters अवैध रूपमा जानकारी प्राप्त अनलाइन जानकारी को कार्य मा पूर्ण छ। अधिकतर अवस्थामा, ह्याकरहरूले सान्दर्भिक प्रतिनिधिको लागि अनुरोध गर्ने वास्तविक प्रतिनिधि र फोन क्रेडिट कार्ड धारकहरूको अनुमान लगाउँछन्। त्यसपछि, तिनीहरू व्यक्तिगत जानकारी निकाल्न अन्तरक्रियाको लागि निम्न उपायहरू प्रयोग गर्छन्।
गैजेट को लागि टेक्स्ट मैलवेयर
नकली साइटहरु को लागि यातायात को Rechanneling
साइबर चोरहरूले पनि पैचिङ वा ग्लिचहरू पत्ता लगाएर सञ्जाल सुरक्षा प्रणालीहरू पहुँच गर्नका लागि टोलीलाई डेट गर्दैनन्। यी अंतरालहरूको उपस्थितिले ह्याकरहरू लाई फायरवालको उपस्थितिमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ।
ई-वाणिज्य संगठन कसरी धोखाधडी कम गर्न सक्छ?
तपाईंको ई-वाणिज्य भण्डारमा धोखाधड़ीद्वारा खतरनाक खतरा पुरा गर्न कठिन छ। तपाईं भुक्तानी धोखाधड़ी विरुद्ध तपाईंको व्यवसायको रक्षा गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ:
प्रमाणित साबित प्रोसेसरको साथ हातमा सामेल हुनुहोस्।
महत्वपूर्ण डेटा को उपयोग को आसपास घुमावदार एक नीति को डिजाइन।
विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर प्रयोग गरी लगातार आधारमा सुरक्षा जाँच सञ्चालन गर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नु अघि कि ग्राहक बनाउन ग्राहकको लगइन व्यक्तिगत खातामा।
सुनिश्चित गर्नुहोस कि लगइन डेटा र टोकन नियमित रूप देखि बदलयो।
भुक्तानी धोखाधडी तपाई र तपाइँको क्लाइन्टको लागि हानिकारक हो। भ्रामक रूपमा धोखाधडी विरुद्ध तपाईंको ई-वाणिज्य साइटको सुरक्षा गर्न, तपाइँ आफ्नो व्यवसायको विश्वसनीयता अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।